कस्ता व्यक्तिलाई न्यायपरिषद् सदस्य तथा न्यायाधीश बनाउने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
कस्ता व्यक्तिलाई न्यायपरिषद् सदस्य तथा न्यायाधीश बनाउने ?
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार १४:३०:००
काठमाडाैँ-संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिका तीनै अंगको पूर्ण सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ । संसदीय शासन पद्दतिमा यी तीन अंगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यी तीनै अंगको भूमिका र तिनीहरूबीचको सन्तुलन संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका, यी अंगबीचको सन्तुलन संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
संवैधानिक परम्परामा यी तीन अंगमध्ये पनि न्यायपालिकालाई विशेष मानिन्छ । त्यसो हुनुको कारण संविधानको कार्यान्वयनमा यो अंगको ठूलो भूमिका हो । सरकार तथा संसदले कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा संविधानसँग बाझिएको छ कि ?
कतै शासन संयन्त्र चलाउँदा संविधान उल्लंघन पो भएको छ कि भन्ने कुरा हेर्ने र त्यस्तो अवस्थाबाट रोक्ने काम न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतको हुन्छ ।
न्यायपालिकाको त्यति ठूलो महत्व भएकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यक्ति योग्य, नैतिकवान्, निडर र कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित नहुने हुनुपर्ने मान्यता छ ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सरकारले सकेसम्म पार्टी र नेताको हितविपरीत नजाने व्यक्ति खोज्ने प्रचलन बढेको छ ।
सरकारले आफ्ना प्रभावका व्यक्ति सर्वोच्चमा लैजाने, अझ व्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भागबन्डासमेत हुने गरेको छ । पार्टी तथा नेताहरूले आफूहरूप्रति आज्ञाकारी व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा पुर्याउने गरेका छन् ।
जसले गर्दा न्यायक्षेत्रमै गम्भीर प्रभाव पर्दै आएको छ । यसो हुँदा न्यायाधीशहरूले गरेका न्यायिक फैसलामा समय–समयमा सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
यस्तो यथार्थबीच नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्त गर्नका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ ।
भर्खरै सम्मन्न देशभरका कानुन व्यवसायीको भर्चुअल भेलाले सो माग गरेको हो । न्यायालयलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइएको छ । बार एसोएिसनको भेलाले न्यायपरिषद्बाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई न्यायाधधीशमा नियुक्त नगर्न माग गरेको छ ।
अर्को, बार र प्रधानमन्त्रीद्वारा न्यायपरिषद्मा सिपारिस हुने व्यक्ति संविधान र कानुको मापदण्ड त पूरा गरेको हुनैपर्यो, त्यसका अतिरिक्त पेसामा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने उक्त मागमा उल्लेख गरिएको छ ।
बार एसो सिएसनको भेलाले यस्तो माग राख्नुको कारण पछिल्लो समय सरकारले योग्य र काममा प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्मा लैजानुको साटो आफ्नो मान्छेलाई लैजाने प्रवृत्तिले हो ।
न्यायपरिषद् सदस्यमा आफ्नो मान्छे लैजाने, उसको सेवा समय सिद्धिएपछि पुनः सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादन कमजोर हुँदै गएको छ ।
पछिल्ले समय सवोच्चदेखि उस मातहतका अदालतले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका आरोपीलाई बिगोभन्दा कयौं गुणा थोरै धरौटीमा छाड्नु, कानुन, तथ्य, प्रमाणलाई न्यायाधीशले ख्याल नगरी फैसला गर्दै आएको देखिएको छ । न्यायाधीशहरूले स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्चकै नजिरलाई वास्ता नगरेर न्याय सम्पादन गरेको पनि सामान्य बन्दै गएको छ ।
हुन त न्याय सम्पादन स्वच्छ र न्यायपूर्ण बनाउन ठूलो भूमिका हुन्छ । उनीहरूमा उच्च ज्ञानका साथै नैतिकता भएमा न्यायसम्पादन उच्च खालको हुन्छ तर न्यायालय स्वच्छ हुनैपर्छ ।
न्यायालय स्वच्छताको विषयमा बारले समयसमयमा आवाज उठाइरहेको देखिन्छ तर पछि त्यत्तिकै टुंगिने गरेको छ । यसमा पनि भागशान्ति भएपछि तैं चुप मैं चुपको सिद्धान्तले काम गरेको पनि हुन सक्छ ।
सबैभन्दा यथार्थ कुरा के हो भने न्यायपरिषद् नियुक्त हुने व्यक्ति पेसाप्रति इमान्दार, संविधानको ज्ञाता तथा उच्च योग्य व्यक्ति हुनैपर्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश उच्च नैतिकवान तथा योग्य व्यक्ति हुनैपर्छ ।
चाकरीको भरमा न्यायाधीश बन्नेले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनै सक्दैन । पार्टी तथा नेताका नजिकका जस्तापायो त्यस्ता व्यक्ति लगेपछि उनीहरूको काम पार्टी र नेताको हितमा हुने नै भयो । न्यायालयलाई स्च्छ बनाउने हो भने यी कुरालाई ख्याल गर्नैपर्छ ।
बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार ललितपुरबाट पक्राउ